Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra hilalao piano | Androidsis
Sarotra ny mianatra mitendry zavamaneno. Mila fanazaran-tena mandritra ny taona maro sy fikirizana. aza ny finday android mety ho fanampiana fanampiny ho an'ireo mpampiasa te hianatra hitendry piano. Satria misy ny fampiharana mamela anao hanao fanazaran-tena ary amin'izay dia afaka manatsara sy mampihatra matetika kokoa. Izy ireo koa dia safidy tsara ho an'ireo mpampiasa te hianatra ny fototra.
Noho izany, eto ambany izahay mamela anao hifantina ny fampiharana tsara indrindra izay hitantsika amin'ny Android hianarana hitendry piano. Ka raha mitady hianatra bebe kokoa ianao, na miala voly fotsiny dia azonao atao amin'ny fampiharana ireo.
Ny fisafidianana ireo karazana rindranasa ao amin'ny Play Store ireo dia tsy lehibe indrindra. Na dia misy aza ny rindranasa sasany izay tokony ho raisina ary azo inoana fa misy ny sasany izay tena mahaliana anao. Ity no safidintsika.
1 Piano tonga lafatra
2 Piano - Hira, naoty, mozika kilasika sy lalao
3 Mpampianatra piano tena izy
4 Piano tena izy
Piano tonga lafatra
Manomboka amin'ny rindranasa izay hitan'ny maro ho fampiharana tsara indrindra hianarana hilalao piano amin'ny Android izahay. Manana ny piano eo amin'ny efijery isika rehefa misintona ilay rindranasa, izay ahafahantsika manitsy ny sakan'ny lakile mba ahazoana aina kokoa antsika milalao amin'ny fotoana rehetra. Inona koa, manana safidy lehibe amin'ny hira 70 amin'ny fampiharana izahay, mba hahafahantsika manao fanazaran-tena. Fa raha irintsika dia afaka mampakatra hira isika ary afaka mampifandray ny kitendry ivelany amin'ny alàlan'ny USB. Ka tsy mila mampiasa ny efijery telefaona isika raha tsy tiantsika. Izy io dia manana interface tsara, mora be ho an'ny rehetra ampiasaina. Safidy tsara hodinihina.
Piano - Hira, naoty, mozika kilasika sy lalao
Faharoa, miandry antsika ity rindranasa hafa ity, izay iray amin'ireo zavatra feno indrindra hitanay tao amin'ny Play Store. Safidy tsara hianarana hitendry piano sy izany miavaka indrindra amin'ny mozika safidiny lehibe. Ny zavatra tsara dia manana fomba mozika maro isika. Araka izany, afaka hilalao mozika kilasika isika, hatrany amin'ny jazz ary amin'ny karazany maro hafa. Azontsika atao koa ny manao fanazaran-tena amin'ny feo maro samihafa. Ary koa, ny kalitaon'ny feo dia tsara. Manana tutorial maro izahay izay hampianatra anay hilalao hira tsikelikely, ka safidy tsara io raha liana amin'ny filalaovana piano kely ianao. Izany rehetra izany dia amin'ny interface mora be ampiasaina.
Piano - Hira sy lalao
Mpampianatra piano tena izy
Ny fampiharana fahatelo ao amin'ny lisitra dia safidy iray hafa tena feno, izay hevitra tsara ho an'ireo mpampiasa te hianatra nefa tsy manana fahalalana. Satria izy io dia hanampy antsika handroso tsikelikely amin'ny fomba tsotra. Mizara lesona ny fampiharana, mba hahafahantsika miroso sy mampiasa azy raha mifanaraka aminy indrindra. Ankoatr'izay dia manana maodin-dalao sy fomba maody malalaka isika, hahafahantsika mitendry izay tiantsika amin'ny piano. Izy io dia fampiharana izay mampianatra antsika amin'ny fomba tena mahafinaritra sy mahafinaritra, amin'izay ianao dia hianatra zavatra betsaka momba ny fitendrena piano sy ilay zavamaneno.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita doka. Tsy mahasosotra loatra izy ireo, soa ihany.
Piano tena izy
Izahay dia manidy ny lisitra amin'ity rindranasa ity izay safidy tsara ho an'ny mpampiasa hampihatra azy tsara ao. Ny mampiavaka ity rindranasa ity dia ny azon'ny olona manana na tsy manam-pahalalana. Amin'ity lafiny ity dia tsy fampiharana izay mampianatra antsika, fa izahay kosa manana piano sy hira maro azo ampiharinar. Ka mifantoka kokoa amin'ny fampiharana ny zavatra izay efa nianarantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hilalao piano
Google Pixel miaraka amin'ny Snapdragon 710 dia ho tonga amin'ny taona 2019
Ny lalao vaovao tsara indrindra ho an'ny Android